Mariela Carril | | နေရာထိုင်ခင်း, ဘရပ်ဆဲလ်
ယနေ့ဖြစ်နိုင်ခြေ နေရာထိုင်ခင်း။ ဥပမာအားဖြင့်အိမ်များ၊ တိုက်ခန်းများသို့မဟုတ်အခန်းများငှားရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအားစောင့်ရှောက်နေစဉ်တွင်တည်းခိုခန်းများရှာဖွေခြင်းကိုခွင့်ပြုသည့်ဂန္ထဝင်ဟိုတယ်များတွင်လျှောက်လွှာများထည့်သွင်းထားသည်။ သို့သော်စွန့်ပစ်မထားသူများရှိပါသည် ဟိုတယ်များ နှင့်ယနေ့သူတို့ထဲကအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုနှင့်၎င်းတို့၏စတိုင်ကိုတိုးတက်ပြီဟုပြောရမည်ဖြစ်သည်။
ကတူပုံရသည် ဒီမြို့မှာစျေးနှုန်းတွေဝယ်လိုအားမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည် ထို့ကြောင့်ဥရောပသမဂ္ဂအစိုးရ၏အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အခါတိုင်းဤစျေးနှုန်းများမြင့်တက်လာသည်။ ထို့ကြောင့်အောက်ဖော်ပြပါဟိုတယ်များတွင်တည်းခိုရန်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံရန်နေရာထိုင်ခင်းရှာဖွေရေးကွန်ရက်စာမျက်နှာသို့ဝင်ရောက်ခြင်းသည်မကောင်းသောအကြံမဟုတ်ပါ။
သင်အမေရိကန် hosp ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုပုံစံကိုကြိုက်နှစ်သက်လျှင်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာတစ်ခုဖြစ်သည် ဟိုတယ် Aloft ဘရပ်ဆဲလ် Schuman။ ၎င်းတွင်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအထူးဂရုပြုထားပြီးကျယ်ဝန်း။ ကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားပြီးအဆင်ပြေသောအခန်းများရှိသည်။ အရောင်တွေအများကြီး၊ ခေတ်မီပရိဘောဂတွေ၊ စူပါအဆင်ပြေတဲ့အပြင်ကြီးမားတဲ့ရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းတွေအဖြစ်ရောင်းချတဲ့ကုတင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ life ည့်ခန်းမှာညအိပ်တာ ၀ န်ရှိပေမယ့်အစားအစာနဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးမမျှော်လင့်ပါဘူး။
ဤဟိုတယ်သည်မြို့၏ရှေးအကျဆုံးနှင့်သမိုင်းအရဆုံးနေရာဖြစ်သည့် Place Schuman နှင့်နီးသည်။ သို့သော်သင်ကအကောင်းဆုံးနေရာကိုမရှာဖွေလျှင်၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာစျေးကောင်း။
MAS နေထိုင်မှု ဥရောပရပ်ကွက်နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်စင်တာကြားတွင်တည်ရှိသောဟိုတယ်ဖြစ်သည်။ သင်မိနစ် ၂၀ လမ်းလျှောက်လျှင်သင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့မဟုတ်တော်ဝင်ပြတိုက်သို့ရောက်ရှိသည်။ ဒါဟာနှစ်ဆယ်ရာစုအစောပိုင်းကနေချိန်းတွေ့သောအဆောက်အ ဦး, သုံးခုအဆောက်အ ဦ ၏ရှုပ်ထွေးသောနှင့်စတိုင်နှင့်အတူပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်သစ်မာကြမ်းခင်းများ၊ ထင်းမီးဖိုများ၊ အမှောင်ထုများနှင့်အခြားကာလအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
ဟိုတယ်ကကမ်းလှမ်းတယ် တိုက်ခန်းများနှင့်အခန်းများ သူတို့ထဲကတစ်ဝက်ကလမ်းကိုကြည့်ပြီးကျန်တစ်ဝက်ကနောက်ဘက်ဥယျာဉ်များကိုကြည့်ကြသည်။ အများစုမှာလေအေးပေးစက်တပ်ထားတယ်၊ ဓာတ်လှေကားလည်းရှိတယ်၊ ကားရပ်နားခကိုတစ်ရက်ကို ၁၈ ယူရိုလောက်ပေးတယ်။ ရှိပါတယ် 25 ယူနစ် အကများအမျိုးအစားများ (rumba, twist, etc) ဖြင့်နှစ်ခြင်းခံသည်။
အဲဒီမှာ အစုံနှင့်တိုက်ခန်းများ living ည့်ခန်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးအခြေခံနှင့်လည်း, စျေးနှုန်းမြင့်မားများအတွက်, သေးငယ်တဲ့ဥယျာဉ်တော်နှင့်အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းနှင့်အတူသီးခြား duplex ရှိပါတယ်။ နှစ်ယောက်ခန်းအခန်းကဏ္ prices 78 ယူရိုကနေ နိမ့်ရာသီ၌။ မနက်စာကိုသီးခြားစီပေးပြီး ၁၅ ယူရိုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ဝိုင်ဖိုင်သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဘရပ်ဆဲလ်ရှိဟိုတယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ Zoom ဟိုတယ်, စက်မှုစတိုင်တစ်ခုလေကြောင်း ရေနွေးငွေ့ပန့်ခ်ကျနော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ် အရာအားလုံးဓာတ်ပုံကိုပတ်ပတ်လည်လည်, ဤအရပ်မှနာမကိုအမှီ။ Saint Gilles နှင့် Ixelles တို့၏တောင်ဘက်ဆင်ခြေဖုံးများနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောမြို့လယ်၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ သင်ဟိုတယ်မှနာရီဝက်ကျော်လမ်းလျှောက်ရုံဖြင့်မြို့၏ဗဟိုဖြစ်သော Grand Place သို့လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။
zoom ကိုအနီရောင်၊ အဝါရောင်၊ sepia၊ အနက်နှင့်အဖြူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အလုပ်လုပ်သည် ပြန်လည်အသုံးပြုပြီးသောအိမ်ဟောင်းနှစ်လုံး။ reception ည့်ခံသည် ၂၄ နာရီအလုပ်လုပ်သည်။ ဓာတ်လှေကားသုံးခုရှိပြီးစားပွဲနှင့်ထိုင်ခုံများပါသည့်အပြင်ဘက်တွင်ကျန်ရှိနေသေးသည်။ စုစုပေါင်းရှိပါတယ် အခန်း ၆၀၀ အတော်လေးအဆင်ပြေ, ဘရပ်ဆဲလ်၏ရုပ်ပုံများနှင့်အတူအလှဆင်။ ၎င်းတို့အားလုံးတွင်ရုပ်မြင်သံကြားစက်၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်စားပွဲခုံများရှိပြီးအချို့မှာလက်ဖက်ရည်နှင့်ကော်ဖီဖျော်စက်များတပ်ဆင်ထားသည်။
XL တွင်ဆိုဖာအိပ်ရာ၊ ခေါင်းအုံးမီနူး၊ မြေအောက်ရထားများနှင့်အတူရေချိုးခန်းနှင့်နွေရာသီတွင်လှေကားထစ်များကိုယူဆောင်လာနိုင်သည့်အရာအားလုံးနှင့်အတူနံနက်စာသုံးဆောင်သောအခန်းများရှိသည်။ ဘားတခုရှိပါတယ်အဖြစ်သွားရောက်ကြည့်ရှုခံရဖို့ထိုက်တန်ပါတယ် ဘယ်လ်ဂျီယံဘီယာ ၅၀ ရဲ့မီနူး နှင့်ချောကလက်အမျိုးမျိုး။ နှစ်ယောက်ခန်းအခန်းကဏ္ have ရှိပါတယ် 65 ယူရိုကနေ နိမ့်ရာသီ၌။
နောက်ထပ်စတိုင်ဟိုတယ်သည် ရထားဟိုတယ်။ ရထားနှင့်ပတ်သက်သောအရူးအမူးစွဲလမ်းသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လှေကားထစ်များနှင့်လမ်းထောင့်မှကြည့်လျှင်နှစ်ခုရှိသည် လှည်းဟောင်းတွေ။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည်စျေးပေါ။ မျှဝေထားသောအခန်း (၁၅) အိပ် (အိတ်နှင့်အ ၀ တ်အရံတစ်လုံး) သို့မဟုတ်အခြားငှားရမ်းထားသည်။ အခြားတစ်ခုမှာမူကိုယ်ပိုင်ရေချိုးခန်းနှင့်လှေကားထစ်ဖြင့်ထူးခြားသည့် retro-style suite ရှိသည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ normal ည့်သည်များ, စုံတွဲများသို့မဟုတ်အုပ်စုများကအသုံးပြုနိုင်တဲ့ပုံမှန်, ခေတ်သစ်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခန်းလည်းရှိပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှသောကြာနေ့အထိတနင်္ဂနွေမှတနင်္ဂနွေအထိနေ့လည်စာနှင့်ညစာကိုတည်ခင်း the ည့်ခံသည့် Train Bistro တွင်ဟိုတယ်သည်နံနက်စာသုံးဆောင်ပါသည်။ ဘားလည်းရှိပြီးareaရိယာ၌, ထို Schaerbeek ရပ်ကွက်အတွင်းစားသောက်ဆိုင်တော်တော်များများရှိတယ်။ အဆိုပါနှစ်ဆအခန်းများအတွက်စတင်ပါ 60 ယူရို.
သင်တစ် ဦး ထက်ပိုသောအရာတစ်ခုခုရှာနေလျှင် အိပ်ရာ & နံနက်စာ ထို့နောက် option ကိုဖြစ်ပါတယ် DRUUM။ ၎င်းတွင်အခန်း ၆ ခန်းသာရှိသည်၊ တစ်ခုစီတွင်ခေတ်ပြိုင်ဒီဇိုင်နာနှင့်အနုပညာရှင်တစ် ဦး ၏လက်မှတ်ဖြစ်သည်။ ဟိုတယ်ကအရမ်းကြီးတယ် 1840 ကနေအဟောင်းအိမ်ကြီး, နောက်ပိုင်းတွင်ပိုက်စက်ရုံသို့ကူးပြောင်း။ ပိုင်ရှင်များသည် guests ည့်သည်များနှင့်နီးကပ်စွာရှိပြီးမြေအောက်ခန်းတွင်လက်ဝတ်ရတနာပြပွဲများသို့မဟုတ်အနုပညာပွဲများကျင်းပလေ့ရှိသည်။
ဟိုတယ်သည်တိတ်ဆိတ်သောလမ်းပေါ်ရှိချာလိုရိုင်းတူးမြောင်းအနီးရှိလှပသောရပ်ကွက်တစ်ခု၊ Boulevard de Barthèlèmyနှင့်မနီးမဝေး၊ ဆူညံပြီးတက်ကြွသောလမ်းပေါ်ရှိလျှင်တည်ရှိသည်။ သင်ဤဟိုတယ်ကိုကြိုက်လျှင်သင်အွန်လိုင်းတွင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်၊ ထိုတွင်အခန်းတစ်ခန်းချင်းစီ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်ရရှိသည်။ တီဗွီမရှိဘူးဟုတ်တယ်၊ ဟိုတယ်ရဲ့ယေဘူယျအားဖြင့် B&B ရဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။ နှစ်ယောက်ခန်းအခန်းကဏ္ prices တစ်နှစ်ကိုယူရို ၁၃၀ ကနေ, မနက်စာပါဝင်သည်နှင့်အခမဲ့ Wi-Fi,
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် brussels ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဟိုတယ်စာရင်းတွင်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အဆုံးသတ်သွားသည် လူငယ်ဘော်ဒါဆောင်။ YH အိပ်စက်ခြင်းကောင်းပြီ, Gare du Nord ရထားဘူတာရုံနှင့်နီးသည်နှင့် Rogier မက်ထရိုဘူတာရုံနှင့်နီးစပ်နှင့်သမိုင်းဝင်စင်တာ Grand Place ကနေ 10 မိနစ်လမ်းလျှောက်။
ဒီလူငယ်ဘော်ဒါဆောင်တစ် ဦး အတွက်အလုပ်လုပ်ပါတယ် ခြောက်ထပ်တိုက်, ခေတ်မီခြင်းနှင့်စတိုင်။ Sleep Well သည် ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းမှ စ၍ အကျိုးအမြတ်မယူသောလူငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းများကဖော်ရွေပျူငှာစွာဖြင့်ငယ်ရွယ်ပြီးစက်ဘီးများကိုငှားရမ်းကြသည်။ ဘရပ်ဆဲလ်တဝိုက်တွင်အခမဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အခမဲ့ကွန်ပျူတာများနှင့်အဝတ်လျှော်စက်နှင့်လေမှုတ်စက်တို့ပါရှိသည်။ ဘုံareaရိယာပေါင်းသင်းဘို့ဂိမ်းများပါဝင်သည်။
အဆိုပါဘော်ဒါဆောင်ရှိပါတယ် အခန်းပေါင်း ၃၇ ခန်း၊ တစ်ကိုယ်ရေအချို့၊ အမွှာနှင့်လူ ၆ ယောက်အထိ bunk ကုတင်နှင့်အတူ။ ကြယ်တစ်လုံးတည်း၊ နှစ်ဆနှင့်သုံးဆသောအခန်းများသည် ပို၍ အဆင့်မြင့်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသော၊ ရေခဲသေတ္တာနှင့်တီဗီများပါရှိသည်။ ထို့နောက်မိသားစုများသို့မဟုတ်လူသုံး ဦး မှလေးယောက်ရှိသည့်အုပ်စုများအတွက်သီးသန့်သီးခြားကျန်ရှိနေသေးသောမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများနှင့်အချို့အတွက်မီးဖိုချောင်ငယ်လေးတစ်ခုရှိသည်။ အခန်းအားလုံးတွင်ကိုယ်ပိုင်ရေချိုးခန်းရှိသည်။
နှုန်းတွင်စာရွက်များပါသော်လည်းသုတ်ပဝါများပါမပါ။ မနက်စာကရိုးရှင်းပေမယ့်ကောင်းပါတယ် ဘားတစ်ခုရှိသော်လည်းတည်နေရာအလွန်ကောင်းသဖြင့်စားသောက်ရန်ပတ် ၀ န်းကျင်များစွာရှိသည်။ နှစ်ယောက်ခန်းအခန်းကဏ္ have ရှိပါတယ် 69 ယူရိုကနေ နိမ့်ကျရာသီ၌, နံနက်စာပါဝင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘရပ်ဆဲလ်မှာဟိုတယ်နဲ့နေရာထိုင်ခင်းအမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိပေမယ့်ငါတို့စာရင်းထဲကတစ်ခုကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်။ ကောင်းမွန်သောခရီးစဉ်!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » ဘရပ်ဆဲလ် » ဘရပ်ဆဲလ်ဟိုတယ်